ग्लोबल पुनर्विक्रेता कार्यक्रम FAQ
कार्यक्रम भुक्तानी र लाभ मार्जिन प्रयोगकर्ता लाइसेन्स हार्डवेयर
वितरक र व्यापारीको बीचमा के फरक छ?
• व्यापारी भन्दा उच्च स्तर
• उच्च लाभ साझेदारी प्रतिशत प्रतिशत र एक उच्च बिक्री कोटा को मजा लिन्छ
डिलर र ग्राहक खाताहरूको निगरानी गर्न वितरकको प्रशासक खाता प्राप्त गर्नुहोस्
• आफ्नो क्षेत्रमा डिलरहरू नियुक्त गर्न अनुमति दिन्छ
• मूल विक्रय कमीशन प्रतिशत र कम सेल्स कोटा
• आफ्नो बिक्रीको निरीक्षण गर्न डीलरको प्रशासक खातालाई दिईयो
आवेदन गर्न पुन: पुनर्विक्रेता योग्यता कसरी निर्धारण गर्ने?
म हाललाई अधिकृत फिंगरसेक रिसेलरमा छु, म स्वचालित रूपमा टाइमटेक पुनर्विक्रेताको रूपमा पनि योग्य हुनुहुन्छ?
हो। एक FingerTec प्राधिकृत पुनर्विक्रेता हुनु भएको बेला तपाईंलाई तुरुन्तै टाइमटेक पुनर्विक्रेतालाई दिन्छ। यद्यपि, तपाईं अझै पनि टाइमटेक प्रणालीको लागि दर्ता फारम भर्नु पर्नेछ, र तपाईंको टाइमटेक पुनर्विक्रेता को सक्रिय गर्न पुनर्विक्रेता सम्झौताका सर्तहरू र सर्तहरू स्वीकार गर्नुहुनेछ।
पुनर्विक्रेताको रूपमा मेरो जिम्मेवारी के हो?
तपाईंले धेरै ग्राहकहरूलाई सकेसम्म साइन अप गर्नु पर्छ र सबै प्रणालीको सेटअप, प्रशिक्षण, कम्युनिकेशन र बिक्री सेवा पछि सङ्कलन गर्नु पर्छ।
हो, तथापि लगानी कम से कम छ र यो हाम्रो साथ व्यापार सुरु गर्न स्टोर क्रेडिटको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। विवरणको लागि हामीलाई जानकारी @timeteccloud.com मा इमेल गर्नुहोस्।
टाइमटेक ग्लोबल पुनर्विक्रेता कार्यक्रममा प्रशिक्षणको लागि नामांकन कसरी गर्ने?
हामी अनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध गराउँछौं; तपाईं http://www.fingertec.com/webinar/timeteccloud/ मा वेबिनार सत्रको लागि हाम्रो साथ दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँले आफ्ना ग्राहकहरू वा तपाईंको अवधारणा ग्राहकहरूलाई प्रशिक्षण सत्रमा सामेल गर्न निमन्त्रणा गर्न सक्नुहुन्छ। फिलहाल, हामी अंग्रेजीमा सबै पाठ्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछौं। अधिक दर्शकहरूलाई पुग्नको लागि, तपाईलाई तपाइँको स्थानीय भाषामा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित हुन्छ र तपाईं हाम्रो वेबिनिन उपकरण पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग कुनै पनि समयमा आफ्नै आफ्नै वेबिनार सत्रहरू सेट अप गर्न को लागी सम्पर्क गर्नुहोस्।
म नयाँ रिसेलर हुन चाहानुहुन्छ तर मेरो फिंगरटेक वा क्लाउड हल बेच्ने कुनै पनि अनुभव छैन। तपाईं कसरी अगाडि बढ्न सल्लाह दिनुहुन्छ?
यदि तपाइँ फिंगरटेक र टाइमटेकमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, तपाइँले हाम्रो वेबिनार सत्रमा भाग लिनु भएको समय टाइमटेक अनुप्रयोग सिक्न र परीक्षण खाता प्रयोग गर्नुपर्नेछ। खाता6महिना भित्र सक्रिय छैन स्वचालित रूपमा अक्षम गरिनेछ। हाम्रो साथ दर्ता भएपछि हाम्रो टोली तपाईको साथमा पछ्याउनेछ।
नं। तपाईंले मात्र अनलाइन अनुप्रयोग फारम भर्नु भएको बेलामा तपाइँले रुचि राख्नु भएको क्लाउड समाधानको लागि मात्र आवेदन गर्दछ। निस्सन्देह यदि तपाईसँग तपाइँको लागि बिक्री कोटा सेट प्राप्त गर्न विश्वस्त हुनुहुन्छ भने अधिक अधिक विकल्प लिन सक्नुहुन्छ।
तपाइँ पुनर्विक्रेताहरूमा कुनै पनि वार्षिक बिक्री कोटा घटाउनुहुन्छ?
हो। बिक्री प्रतिबद्धताहरू एक देशबाट अर्कोमा भिन्न हुन्छन्, र फरक पुनर्विक्रेता स्तरका लागि। थप जानकारीको लागि कृपया हामीलाई जानकारी @timeteccloud.com मा सल्लाह दिनुहोस् ।
के तपाईं हाम्रो देशबाट हाम्रो अनलाइन अनलाइन सर्वेक्षण गर्नु हुन्छ?
प्रत्येक ग्राहकलाई राम्रो स्थानीय समर्थनको लागि एक पुनर्विक्रेतालाई नियुक्त गरिनेछ। यसैले, हामी स्थानीय पुनर्विक्रेतामा प्राप्त कुनै स्थानीय अन्वेषण पारित गर्नेछौं र यो हाम्रो विवेकमा मात्र हो।
TimeTec को मूल्य संरचना के हो र मेरो लाभ मार्जिन के हो?
हाम्रो मूल्य निर्धारणको लागि निम्न लिङ्कहरू हेर्नुहोस्।
सबै पुनर्विक्रेताहरूले 30-50% लाभ मार्जिनको आनन्द लिनेछन्। तपाईंको कमाई मार्जिनको बारेमा कृपया हाम्रो बिक्री विभागलाई सल्लाह दिनुहोस्।
म हाल तपाईंको फिंगरटेक वितरक हुँ। के मैले तपाईंको TimeTec प्रणालीमा डीलर्स नियुक्त गर्न सक्दिन? र मैले कति लाभ उठाउछु एक पटक मेरो डीलर्स केहि टाइमटेक ग्राहकहरु लाई साइन अप गर्छन?
एक वितरकको रूपमा, तपाइँ सामान्यतया तपाईंको प्रत्यक्ष साइन-अप ग्राहकहरूको प्रत्यक्ष सीधी बिलिङबाट 45% मार्जिन र हाम्रो टाइमटेक प्रणालीले दुई स्तरको बिक्री गर्न सक्दछ जुन तपाईले आफ्नो खातामा डीलियर्सहरू दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूको 10-15% मार्जिन कुल बिलिङ। एक वितरक हुनु, तपाईंले टाइमटेक प्रशिक्षणको साथ आफ्नो पुनर्विक्रेता प्रदान गर्न आवश्यक छ।
पुनर्विक्रेता वा टाइमटेक मार्फत, कसरी भुक्तानीहरू लेनदेन गरिनेछ?
यो तिमीमा भर पर्छ। यदि ग्राहकले अनलाइन भुक्तानी गर्न रोज्नु हुन्छ भने, इजाजतपत्रहरूको सक्रियता वास्तविक समयमा हुनेछ, तथापि, यदि प्रयोगकर्ताले अफलाइन विधिहरू मार्फत भुक्तानी गर्दछ, यसले पूर्ण भुक्तानी प्रक्रियाको लागि केही समय लाग्न सक्छ किनभने हामी आवश्यक पर्दछ। हामीले इजाजतपत्र सक्रिय गर्न सक्नु अघि तपाइँबाट भुक्तानीको लागि पर्खनुहोस्। थप जानकारीको लागि कृपया हाम्रो भुक्तानी नीति हेर्नुहोस्।
के यो टाइमकोक क्लाउड सेवा सदस्यता हाम्रो स्थानीय मुद्रामा बेच्न अनुमति दिन्छ?
हो, तर स्थानीय मुद्रामा इजाजत पत्रहरूको बिक्री केवल अफलाइन भुक्तानी विधिहरूको लागि स्वीकार्य छ। यदि तपाइँका ग्राहकहरूले अनलाइन सदस्यताको लागि भुक्तान गर्दछन् भने, केवल USD मुद्रा स्वीकार्य छ।
एक पटक मेरो ग्राहकहरूले तपाईंलाई भुक्तान गरेपछि, तपाईं मेरो मार्जिन मलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्नुहुन्छ?
स्थानान्तरण सफा भएपछि हामी तपाईंको खातामा तपाइँको हार्ज क्रेडिट गर्नेछौं। आयोगको प्रक्रियामा थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
पैसाको स्थानान्तरणमा सधैं बैंक शुल्क समावेश गर्दछ। कसले यस अवस्थामा आरोप लगाउनेछ?
प्राप्ति अन्त बैंक शुल्क र लेनदेनको शुल्क लिनेछ। उदाहरणको लागि, यदि ग्राहकले हामीलाई पेपल मार्फत सीधा भुक्तानी गर्दछ भने, हामी बैंक शुल्कहरू अवशोषित गर्नेछौं।
तथापि, जब तपाईं आफ्नो खाताबाट आफ्नो लाभ मार्जिन को नकद गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई बैंक शुल्क लगाउनु पर्छ।
म कसरी मेरो ग्राहकहरु वा डीलरोंको रेकर्डको ट्रयाक राख्न सक्छु?
तपाईंको पुनर्विक्रेता खाताले तपाईलाई सबै ग्राहकहरु र डीलरोंका रेकर्डहरूको ट्रयाक राख्न सक्षम बनाउँछ। तपाईले कुनैपनि समयमा उनीहरूको स्थिति जाँच गर्न लग इन गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि मेरा ग्राहकहरूले मलाई स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गरेमा, म तपाईंलाई स्थानीय मुद्रामा पनि तिर्नुपर्छ?
छैन। टाइमटेकमा गरिएका सबै भुक्तानीहरू अमेरिकी डलरमा हुनुपर्दछ। मुद्रा विनिमयको कारण कुनै पनि लाभ वा हानि तपाईं द्वारा उत्पन्न हुनेछ। यसैले, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ आफ्नो ग्राहकहरु को लागी सही विनिमय दर को लगान को बारे मा जानें।
यदि मेरा ग्राहकहरूले तपाईलाई सिधै अनलाइनमा भुक्तान गर्दछन्, र कत्तिको र मैले मेरो कमाई कसरी नगर्न सक्छु?
तपाईले लग इन गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि समय आफ्नो खातामा कमाएको कुल कमीशनको लागि जाँच गर्न सक्नुहुनेछ, र PayPal खाता मार्फत कुनै पनि समयमा तपाईंको ब्यालेन्समा कुनै पनि रकम नगद वा तपाइँबाट हामीलाई तपाईंको FingerTec अर्डर अफसेट गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
के मलाई तपाईंको साथमा कुनै पनि अनलाइन लेनदेनको लागी एक PayPal खाताको आवश्यक पर्दछ?
तपाईं सजिलै प्रोत्साहनको लागि पेपैल खाताको लागि प्रोत्साहन दिइरहनुभएको छ, जबसम्म तपाईंको देशमा सेवा प्रदान नगर्नुहोस्; तपाईं हामीलाई भुक्तानी गर्न अन्य विकल्प व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले ग्राहकहरूको लामो अवधिको सदस्यताको लागि एक निश्चित प्रतिशत छुट दिनुहुन्छ, यसले मेरो आयमा असर गर्नेछ?
हो। तपाईंको मुनाफा साझेदारी मार्जिन सधैँ ग्राहकहरूको कुल बिलिङमा आधारित हुनेछ।
यदि मेरो ग्राहकले एक वर्ष बिलिङ चक्रको सदस्यता लिन्छ भने, के मैले आफ्नो लाभ साझेदारी पूरा गर्नेछु?
हो। तपाईंको क्लाइन्टले उनीहरूको भुक्तानी पूरा भएपछि एकदमै सधैँ तपाईंको साझेदारी पूरा गर्नेछ।
म केहि HardwareTimeTec समाधानको साथ बन्डल गर्न चाहन्छु। त्यहाँ कुनै अतिरिक्त उत्पादन वा ग्याजेट टाइमटेक प्रस्ताव छ?
हो हामी गर्छौं। हामी टाइमटेक समाधानहरूमा लागु हुने धेरै आईओटी उपकरणहरू प्रदान गर्दछौं, कृपया निम्नलाई उल्लेख गर्नुहोस्:
• NFC Tag (टाइमटेक गश्ती सँग पनि उपयुक्त) • Lift Control Panel BLE-16 • Smart Reader H2b
हार्डवेयर टाइमटेक बिक्रीबाट अलग हुनु पर्छ, तर यदि ग्राहकले तपाईंको माध्यमबाट तिर्न चयन गर्दछ भने, तपाइँले तपाईको हार्डवेयर बिल र टाइमटेक सब्सक्रिप्शन शुल्क पनि समावेश गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया कुनै पनि पूछताछको लागि info@timeteccloud.com मा हाम्रो बिक्री टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाईं कसरी हार्डवेयर पठाउनुहुन्छ? के तपाईं शिपमेंट को व्यवस्था गर्ने हो या मलाई आफैं को व्यवस्था गर्न को लागी हो?
तपाईं या त आफ्नो द्वारा शिपमेंट को व्यवस्था गर्न सक्छन् या हाम्रो सेल्स टीम संग संपर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि तपाइँ सबै कर सहित शिपिंग सम्बन्धी सबै शुल्कहरूको लागी जिम्मेवार हुनुहुनेछ।
चूंकि टाइमटेक सदस्यता आधार मा संचालित हुन्छ; के मैले मेरो क्लाइन्टहरूमा हार्डवेयर भाडा पनि प्रस्ताव गर्न सक्छु?
हो तपाई यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ, तर टाइमटेकले तपाईंलाई कुनै पनि भाडा सेवा प्रदान गर्दैन। टाइमटेकसँग तपाईंको सम्बन्ध एकदम सही बिक्री आधारको रूपमा रहनेछ।